ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လစာအမြင့်ဆုံးရသော အောင်လက်မှတ် ၁၅ မျိူး - MYSTERY ZILLION
မူလ › Sharing › ဖတ်စရာ
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လစာအမြင့်ဆုံးရသော အောင်လက်မှတ် ၁၅ မျိူး
December 2010 edited January 2011 in ဖတ်စရာ
ကျွန်တော. ဆီ မှာ ၀င်တဲ. မေးလ်လေးကို MZ ညီအကိုမောင်နှမများကို ပြန်လည် ေ၀ငှလိုက်ပါတယ်...... :redface::redface::redface::redface:
[FONT="]ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လစာအမြင့်ဆုံးရသော အောင်လက်မှတ် ၁၅ မျိူး[/FONT]
[FONT="] PMP (Project Management Professional)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းမှာစ၍ရရှိသော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CAMP (Certified Associate in Project Management)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၁၀၁၁၀၃ ရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] ITIL (IT Infrastructure Library)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၉၅၄၁၅ ဒေါ်လာရရှိုနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CISSP (Certified Information System Security Professional)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၉၄၀၁၈ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CCIE ( Certified Cisco Routing and Switching)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၈၈၂၄ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CCVP (Certified Cisco Voice Professional)[/FONT]
[FONT="] ITIL Master (IT Infrastructure Library Master)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၆၆၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်ရရှိနိုင်သောမျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၄၅၂၂ ဒေါ်လာရရှိုနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CCNP (Cisco Certified Network Professional)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၄၁၆၁ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] RHCE (Red Hat Certified Engineer)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၃၆၉၂ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] MCITP (Microsoft Certified IT Professional)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၂၉၄၁ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] CCSP (Cisco Certified Security Professional)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၀၀၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] MCAD (Microsoft Certified Application Developer)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၉၄၄၄ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] MCITP (Database)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၇၀၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="] MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)[/FONT]
[FONT="]အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၆၉၆၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="]CNet အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT="]လစာမှာ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ လစာဖြစ်သည်။[/FONT]
လက်မှတ်ရှိတိုင်း လစာအဲလောက်ရရင် ခက်ရချည်ရဲ့ လက်မှတ်တွေရအောင် မလုပ်ခင် အဲလောက်လစာပေးနိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီပဲအရင်ဆုံး ဘယ်နှစ်ခုရှိမလဲ အရင်ရှာပါဦးလေ။
experience တွေ နှစ်ချီ ပြီးရှိနေပေမယ်. ..အလုပ်ရှင်ဘက်က လက်ခံနိုင်လောက်တဲ. certificate တွေမရှိဘူး ဆိုရင်လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူးလေ..
စလုံးမှာတော့ မြန်မာတစ်ယောက် ၆၀၀၀ လောက်ပေးဖို့ ဆိုတာ တော်တောခက်တယ်။ US မှာတော့ အဲလောက် လစာတွေ ရမယ်ထင်တာပဲ။ နောက်ပြီး ၁ နှစ်ပျမ်းမျှ လစာဆိုတာက ၁၃ လစာပါ။ ၁၂ လစာ မဟုတ်ပါ။
လုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အပြင် ... လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ ပေါ်မှာပါမူတည်ပါလိမ့်မယ်။
CCNP လက်မှတ်ရတစ်ယောက် MM IT company တစ်ခုမှာလုပ်ရင် သုံးသိန်းထက်ပိုမရနိုင်ပေမဲ့ ... နိုင်ငံခြားမှာလုပ်ရင်တော့ အဲဒီ ဆယ်ဆရနိုင်မှာပါ။
UN မှာ၀င်လုပ်ရင်တောင် Yangon မှာရတဲ့လစာကတစ်မျိုး၊ New York မှာရတဲ့လစာကတစ်မျိုးဖြစ်နေမှာပါ။
စလုံးမှာ တစ်ယောက်ကို ၈၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀ လောက်ရနေတဲ့ ဗမာအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးရှိတယ်
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါသင့်ဖို့ပဲ လိုတယ်.....
ကမ္ဘာ့ လစာ အနည်းဆုံး Certificate တွေ ရော မရှိဘူးလား ဗျ .
နောက် ကမ္ဘာလစာ အနညး်ဆုံးနိုင်ငံတွေ စာရင်းမှာတော့ ကျွန်တော် တို့ က တစ်လ ပျှမ်းမျှ ၁၅၀၀၀ , တစ်နေ့ ငါးရာကျပ် ပဲ ရသဗျ .
မဆိုးဘူး ကျွန်တော်တို့ တကယ်ရတာက လေးငါးသောင်းဆိုတော့ .. ပိုပေးထားတာကိုပဲ ကျေနပ်ပါတယ် .
ဟုတ်.. engineer လိုင်းမှာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်... သူက computer လိုင်းထက်စာရင် စလုံးမှာပိုပြီး လခ ပိုရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂရုပြုစေချင်တာက လခ ထက် ဒီပညာနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘာတွေ ဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်တယ်။ လခ ဆိုတာက အလွန်ဆုံး အသက် ၆၀ ထိပဲ ရမှာ။ ဒါကြောင့် ရေရှည်ပုံမှန် ဝင်နေတဲ့ အရာလို့ မဆိုချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် လခ ဆိုတာထက် ဘယ်လို နည်းလမ်းနဲ့ ဝင်ငွေတိုးပွားအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားချင်တယ်။ လခ တစ်ခုတည်းကို အားမကိုးစေချင်ဘူး။ ပညာ ကို အားကိုးပြီး ဝင်ငွေကို တိုးအောင် ဖန်တီးစေချင်တယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူငယ်တော်တော်များများက လခ လခ လို့ အမြဲအော်နေတာ လူငယ်ဖြစ်နေသေးလို့ဆိုလည်း ဆိုရမှာပဲ။ လခ ဆိုတာက သူ့အတွက် လုပ်ပေးနေလို့ ရတဲ့ အခ လို့ဆိုရမှာပါ။ သူ့အတွက် ပိုက်ဆံ မရှာပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘာ certificate တွေပဲ ရှိထားရှိထား အလကားဖြစ်သွားပြီ။ ဒါကိုလည်း ဂရုပြုစေချင်တယ်။
မှန်၏ ကိုစေတန် ....
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တော့ လူကုန်ကူးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ ပညာရှင်ဆိုရင်ပိုပြီးစျေးရတော့ ...အရင်ဆုံးကိုစေတန်ကို ကူးမယ်။
ပြီးရင် ယပက်လက်မှာ သားဖောက်ပြီး မီးမီးလေးတွေပါလာရင် ထပ်ရောင်းမယ်။
NOTE : လူပျိုကြီးကတော့ နဂိုထဲက ရောင်းမစွံလို့လူပျိုဂျီး ဖြစ်တာဆိုတော့ ... သူ့ကိုကုန်ကူးရင် ကျနော်ပဲ အရှုံးပေါ်မှာမို့လို့ ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပြီ ....
good idea ဗျာ..ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတော့ အဲလိုင်းပြောင်းရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတုံး
December 2010 edited December 2010 Moderators
ကိုအလက်စန္ဒယားကလည်း အဲဒီလိုတော့မပြောပါနဲ ့ဗျာ။
ကိုလူပျီုကြီးကို တို ့ပတ်ရိုက်ပြီး ကူးရင်တော့ စျေးကောင်းရကောင်းရနိုင်ပါရဲ့:P
တစ်ချို ့ထုတ်ကုန်တွေကို ဒီတိုင်းရောင်းလို ့မရရင် ပါကင်လှလှလေးနဲ ့ရောင်းရင် ရောင်းထွက်ရော (အထူးယတြာ )
အင်း .. ဒီနှစ်ယောက်ကို အထောက်အထားနဲ့ အမျိုးသားရေးရာကို ပို့ပြီးတိုင်မယ်
calmhill အတွက် အမျိုးသားရေးရာ မဖွင့်ဘူးတဲ့ :rolleyes: